Allgedo.com » Beeraleyda Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa iminka bilaabay tacbashada Beerahooda, kadib markii Wabiga Jubba uu biyo keenay.
Beeraleyda Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa iminka bilaabay tacbashada Beerahooda, kadib markii Wabiga Jubba uu biyo keenay.
Print here| By: allgedo.com: Thursday, May 11, 2017 // u Jawaab
Qaar kamid ah Beeraleyda ayaa la arkayay iyagoo isku diyaarinaya tacabka beeraha si ay uga faa’iideestaan Wabiga Jubba oo haatan ah mid buuxa ,kadib markii sanadkii la soo dhaafey uu biyo yareeyey,taasoo keentay in Matooradii beeraha Jiimada oo dhan ay shaqeyn waayeen.
Maxamed Cabdiraxmaan Matow oo ka mid ah Guddiga Beeraleyda Baardheere ayaa Warbaahinta u sheegay in Beeraleyda hadda tacabka bilaabay in dib u kaciyeen in ka badan ilaa 950 matoor oo saarnaa webiga Jiinkiisa,dadka muruqmaalka ee ka faa,iedysanayana dhul beereedkaasina ay gaarayaan ilaa 20 kun oo qof,islamarkaana todobaadkii ugu dambeeyey ay bilaabeen in ay kor u qaadaan beerista dalagyo kale gedisan.
Roobabka da,aya ayuu tilmaamay in ay ka da,een deegaano dhowr oo ay horey ugu taagneeyd Abaarta saameysay nolosha dadka iyo deegaanka.
Beeraleyda ayaa tacbaya da;agyada noocyadaooda kala dwuan sida Galeyda,digirta,Sisinta ,Basasha,Yaanyada,Bocorka iyo sidoo kale waxyaabo kale.
Beerlayda bilaabay tacabka beeraha ayaa waxsoosaarkooda u baaqdey labo xilli oo la soo dhaafey taasoo ka dhalatey Abaaraha ba,an ee ka jira Gobolka isla markaana sababtey in deegaanadooda ay ka barakeceen abaarahii ka jiray gobolka Gedo awadeed, iyagoo haatan dib ugu soo laabtay deegaanadooda si ay uga faa’iideystaan xilli sanadeedkaan.
Abaaraha ka jira gobolka Gedo ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen dadka beeraleyda iyo reer guuraaga ee ku dhaqan gobolka, iyadoo bilihii ugu dambeeyay xoolo dhaqato badan ay isaga tageen deeganadoodii si ay u helaan biyo iyo baad.